गरी खान देउ । बन्द लाई बन्द गर । – नेपाल डायरी डट कम
आदरणिय शुसिल दा , नमस्कार !
शुशिल दा , उमेर निकै कट्यो तपाईंको , चुस्स परेका सेता दार्ही र फुलेको केश लिएर देस र जनताका लागि भनेर (तपाइकै शब्द हो यो देस / जनताको लागि राजनीति गरेको भन्ने ) राजनीति गरेको लामै समय भयो । नेपाली जनताको पिर मर्का , समस्या , दु:ख , दुर्दिन को ’boutमा तपाईं भन्दा जानकार अरु को होला र हगी ? सधैं चिन्तित देख्छु , सोचमग्न देख्छु , देस र जनताको लागि नै त होला नि है , नत्र यसरी चिन्ता लिनु पर्ने अरु को नै छ् र तपाईं को ?
शुसिल दा ,
शिव पौडेल मारिए । दु:खलाग्दो कुरा हो यो । उनी मारिए , त्यो पनि जेल भित्र एउटा कैदी कुटी कुटी मारिए । देसमा शान्ती सुरक्षा र अमनचयन छ भनेर कसरी पत्याउने ? यस्तो नालायक सरकार छ कि देश मा जती निन्दा गरे पनि कम हुन्छ , यस्तो नालायक सरकार लाई सत्तामा / कुर्शिमा एक मिनेट पनि बस्ने अधिकार छैन । शिव पौडेल का परिवार लाई राहत दिनु पर्छ , दोशी लाई कारबाही कानुन बमोजिम हिनु पर्छ भन्ने मेरो र सबै आम नेपाली को माग छ । दोषी ले उन्मुक्ती पाउनु हुँदैन ।
मैले तपाईं लाई सम्झाउन आबस्यक त थिएन तर पनि सम्झाउने दुश्साहस गर्दैछु । शिव पौडेलको ’boutमा आम धारणा त्यती सकरात्मक छैन । पत्र पत्रीका , रेडियो र टेलिभिजन मा आएको समाचार अनुसार उनी काठ तस्करमा मात्र होईन , हत्यामा समेत सम्लग्न अपराधी थिए र प्रहरिको खोर मा रहेका एक अभियुक्त थिए । फेरी भन्दैछु , उनी मारिए यस्को बिरोध गर्नै पर्छ तर उनी अपराधी पनि थिए यो पनि कटु सत्य हो । उनी गुण्डा को नाइके हुन भने कही बाट छुपेको छैन ।
मैले यो पंती लेखिरहदा तपाईंहरु को मशाल जुलुस भरखरै सकिएको छ । भोली नेपाल ठप्प पार्ने ठुलो उदघोस् सहित । मैले भने तपाईं हरु को त्यो मशाल को राँको मा मेरो देश दनदन्ती , ह्वारह्वारी बलेको देखे शुसिल दा ।
तपाईं को नेपाल बन्दले भोली एउटा मजदुर ले खान पाउदैन , उस्को परिबारले भोलीको रात भोकै सुत्नु पर्नेछ । जाडो को याम छ ,त्यो रिक्सा चालक, त्यो मजदुर , त्यो भरिया , त्यो फुट्पाथ पसले , त्यो चना चट्पटेले यो जाडो मा भोकै पेट सुत्नु पर्नेछ भोली । यि गरीब र निमुका नेपाली प्रती अलिकती पनि सहानुभुति छैन तपाईंमा ? देस र जनताको लागि राजनीति गरेको भनेर नथाक्ने तपाईंका जनता को हुन ? सुकिला मुकिला , दुइछाक खान पुग्ने, ठुला शाहु मात्र तपाईंका जनता हुन भने मेरो भन्नु केही छैन तपाईं लाई । तर दिन भरी ज्याला मजुरी गरेर खाने पनि तपाईंको जनता , कार्यकर्ता हुन भने उनीहरु को भोको पेटले तपाईंलाई के आषिस देला र दाजु ?
तपाईंको बन्दले भोली एउटा बिरामी समयमा उपचार नपाएर मर्न सक्छ , उस्की जहान बिधवा हुन्छे र सन्तान टुहुरा हुन्छन । एउटा अबोध बाल्क ले बिद्या आर्जन गर्न पाउदैन , आर्थिक नोक्सानी को ठुलो कुरा नगरु दाजु , यहाँ खान लाउनैको ठुलो समस्या भएको बेला । एउटा ज्यामी खान नपाएर चिसो ले कठाङ्रिएर मर्न सक्छ , त्यस्को दोस तपाईं लाई लाग्छ कि लाग्दैन ?
सडकमा टायर बाल्न लगाएर , ढुङ्गा मुढा गर्न युवाहरुलाई उक्साएर तपाईंले खै कस्तो नयाँ , शान्त र सुन्दर नेपालको परिकल्पना गर्नु भएको हो , मेरो सानो मस्तिस्कले भेउ पाउन सकेको छैन तर के चै मलाई थाहा छ भने त्यस्तो तरिका ले देस बन्दैन दाजु । बरु बिग्रछ । तपाईं ले देस र जनताका लागि , त्यो पनि सामान्य ज्यामी , मजदुर , शिक्षक , बेपारी , वकिल , कामकाजी सामान्य नागरिक , सेवा गर्ने कर्मचारि को लागि तपाईंले राजनीति गर्नु भएको हो भने यो अराजकता , तोडफोड र नेपाल बन्द बाट पार दिनुहोस् ।
शिव पौडेलको हत्यामा संलग्न हरु त जेल भित्रै छन , उनिहरुलाई कार्बाही गर्न दबाब दिने अरु पनि तरिका छन नि । सर्बसाधारण को गल्ती छ र नेपालै बन्द गरेर सर्बसाधरण जनताको हुर्मत लिनु ?
नेपाल बन्द गरेर केही जितिदैन दाजु । बन्द त त्यो कुरा गर्नुस् जस्ले हाम्रो देश लाई, समाजलाई नराम्रो असर गरीरहेको छ । भ्रास्टाचार बन्द गर्नुस् , घुस्खोरी बन्द गर्नुस ,ढिलासुस्ती बन्द गर्नुस् , म्याद थप्न बन्द गर्नुस् , टायर बाल्न बन्द गर्नुस् । नेपाल बन्द बन्द गर्नुस् , जनताले मुरी मुरी आसिक दिनेछन । आगामी चुनाउ मा बहुमत त सरकार तपाईंकै बन्ला । :)
सामान्य जनतालाई गरिखान दिनुस् सुशिल दा ! बन्द लाई सधैंको लागि बन्द गर्नुस् ।
अन्त मा अङ्ग्रेजी मा एउटा उखान छ Gray hair is not the sign of wisdom , it’s the sign of old age ! तपाईंको फुलेको केशमा यो उखान लागु नहोस् । बिकेक र बुद्धी ले काम लिनुहोस् ।
यो पोस्टमा केही स्क्रीन सट हरु छन । आज दिन भर सामाजिक सन्जाल फेसबुक र टुइटर मा बन्द को प्रतिक्रिया स्वोरुप लेखिएका ।
Posted in नेपाल डायरीTagged देश,नेपाल,नेपाल बन्द,नेपाली काङ्रेस,बन्द,राजनीति
अघिल्लो फोटो ब्लग । एसीसी ट्वान्टी-२० कप
अर्को काङेसको चुकेको नेत्रित्व-